प्रचण्ड र माधव नेपाललाई पनि एकै ठाउँमा ल्याउनुपर्छ : बामदेव गौतम - Kantipath.com
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले नेता माधवकुमार नेपाललाई अपमान गरेर पार्टीको एकता नहुने बताएका छन् । बालुवाटारमा आयोजित केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बोल्दै उनले माधव नेपालसहितको एकता हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
‘माधव नेपालबिना पार्टी एकता हुँदैन । मुख्य नेताको अपमान गरेर एकता सम्भव छैन,’ उनको भनाइ थियो । उनले अध्यक्ष केपी ओलीलाई एकतालाई सार्थकता दिन पनि आग्रह गरेका थिए । अध्यक्ष ओलीले महाधिवेशन आयोजक कमिटीको गठन गरेयता गौतम कुनै बैठकमा सहभागी भएका थिएनन् । महाधिवेशन आयोजक कमिटी भंग गर्दै केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएपछि उनी सहभागी भएका हुन् ।
गौतमले आफू पार्टीमा फर्किसकेको बताउँदै अब पार्टी एकताका लागि पहल गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा धारणा राख्दै उपाध्यक्ष गौतमले आफू आएपछि पार्टी एकताले पूर्णता पाउने विश्वास व्यक्त गरेका हुन् । ‘म तपाईंकोमा आइसकेँ, अब फर्किन्न,’ उनको भनाइ थियो ।
गौतमले बृहद कम्युनिस्ट एकताका लागि माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई पनि एकै ठाउँमा ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । गौतमले आफू सधैँ पार्टी एकताको पक्षमा रहेको कुरा दोहोर्‍याउँदै भने, ‘पार्टी एकता आजको मुख्य आवश्यकता हो । यसका लागि दुवै पक्ष लचक हुनैपर्छ । कसले हामीलाई छिन्नभिन्न पर्न खोज्दैछ भन्ने बुझ्न जरुरी छ ।’
गौतमले पार्टी एकताको जिम्मा आफूलाई दिन पनि आग्रह गरे । ‘म यति दिन भन्दिनँ तर केही दिनभित्र एकता गर्छु, तपाईं चिक्त बुझ्ने गरी नै एकता गर्छु,’ उनले भने, ‘एमालेपछि अन्य पार्टीसँग पनि एकता गर्छु । विश्वास गर्ने नगर्ने तपाईंको कुरा हो ।’
Previous Previous post: ओलीसँग बोल्ने चाहँदैनन् माधव नेपाल : अरुले कर गरेपछि बल्ल उठाए फोन !
Next Next post: यस कारण पर्‍याे डा. जागेश्वर गौतमविरुद्ध उजुरी !